गाई प्रकरणबारे उपसभामुख तामाङले बल्ल मुख खोलिन, दिइन् यस्तो ९ बुँदे प्रष्टिकरण ! — Sanchar Kendra
गाई प्रकरणबारे उपसभामुख तामाङले बल्ल मुख खोलिन, दिइन् यस्तो ९ बुँदे प्रष्टिकरण !
प्रदेश नम्बर ३ की उपसभामुख राधिका तामाङलाई जोडेर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका टिकाटिप्पणी भएपछि अन्ततः उनले मुख खोलेकी छिन । उनले आफ्नो चरित्र हत्या गर्न खोजिएको भन्दै आफुले यसप्रकारको अभिव्यक्ति नदिएको प्रष्ट पारेकी छिन ।
तामाङले ‘गाईको मासु खान पाउनुपर्ने र गाई काट्नेलाई जेल हाल्ने कानुन संशोधन हुनुपर्ने’ धारणा राखेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत ब्यापक बिरोध भएको छ । यसबारे बिरोध गर्दै उनको गृहजिल्ला नुवाकोटका कांग्रेस नेता कार्यकर्ता सडकमै आएका थिए ।
नुवाकोट कांग्रेसको निर्देशनमा शनिबार साँझ नेविसंघ नुवाकोटले विरोध जुलुस निकालेको थियो । समाजिक सञ्जालमा विरोध र राजनीतिकरणा भइरहँदा तामाङले मुख खोलेकी छिन् । राजनीति प्रतिशोतको आधारमा हल्ला चलाइएको उनको भनाई छ ।
‘यो राजनीति प्रतिशोतको आधारमा चलाइएको हल्ला हो भन्ने लाग्छ मलाई । नुवाकोटमा कांग्रेस हारेको छ । त्यो खपिनसक्नु भएर गलत अफबाह फैलाइएको हो । तामाङले भनेकी छिन, – ‘अर्को तामाङ समुदायको चेलिबेटी बेच्ने सुनबहादुर तामाङलाई वडा अध्यक्ष बनाएर उससँग धेरै खाइपिइ आएका ब्यक्तिहरुले अब खान नपाउने भए । सँगसँगै कांग्रेसको इमेज थप ड्यामेज भयो । र, आत्तिएर म माथि यो प्रहार भएको हो ।’
यस विषयमा तामाङको भनार्इ यस्ताे छ :
–मकवानपुरको पदम पोखरीका बिचौलियाले पैसाको बार्गेनिङ गरेर दिन नसकेपछि गाई काटेको आरोपमा मानिसलाई फसाउने काम गरिएको छ । त्यसको बिरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्न गएको नेपाल तामाङ घेदुङले जो बिषय राखेको छ । त्यसलाई मैले भनेको भनेर चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरिएको छ । यो मलाई मात्र होइन । संघियता, धर्मनिपरेक्षता लगायत सबैमा गरिएको प्रहार हो । यसले कांग्रेसको बास्तबिक चरित्र र केही कम्युनिष्ट भन्नेको पनि चरित्र देखिएको छ ।
यस्तो थियो उपसभामुख तामाङको भनाइबारे सार्वजनिक भएको समाचार
“प्रदेश ३ का उपसभामुख राधिका तामाङले गाईको मासु सेवन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका मकवानपुरका ३ जना व्यक्तिहरुलाई तुरुन्त रिहा गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समक्ष माग गरेकी छिन् । साथै तामांङ समुदायले ऐतिहासिक कालदेखि गाई गोरुको मासु खाने प्रचलन भएकोले गाई गोरु काटेर खादा जेल हाल्ने जुन ब्याबस्था छ यसलाई परिमार्जन गरी विधिगत हिसावबाट उनीहरु माथिको अन्याय हटाउनु पर्ने बताएकी छिन् l
नेपाल तामाङ घेदुङले विहिबार गृहमन्त्री बादल समक्ष माग पत्र पेश गर्न पुगेका प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै उपसभामुख तामाङले उक्त माग गरेकी हुन् । मागपत्र पेश गर्न प्रदेश ३ कि उपसभामुख तामाङ, सांसद तथा अगुवाहरु पुगेका थिए ।
गृहमन्त्री थापाको निवास पुल्चोकमा तामाङ घेदुङका उपाध्यक्ष कुमार घिसिङ, महासचिव बाबु घिसिङ, घेदुङका प्रमुख सल्लाहकार कुमार योञ्जन, सांसद हितबहादुर तामाङ, ३ नम्बर प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङ, पुर्व राज्यमन्त्री सुर्यमान दोङ र प्रदेश ३ का सांसद ओम ग्लान लगायत ध्यानकर्षण गराउन पुगेका थिए ।”